5 ụzọ nyefee foto site na Mac / pc ka iphone
Exporting foto site na Mac / PC ka iphone
Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọ bụ nnọọ ike na-nnukwu ichekwa data na handheld ngwaọrụ dị ka nkwụ n'elu. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka data na mpụga nchekwa ngwaọrụ nke mere na ọ na-anọgide n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi na mgbe pua n'anya. Ka tụnyere handheld ngwaọrụ ọ bụ-ahụ kwuru na mpụga nchekwa ngwaọrụ dị ka Mac akwụkwọ na windows laptọọpụ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na-eme ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere niile ugboro. Idebe data nwere ọtụtụ uru na a ga-hụrụ mgbe ọ na-abịa a nkuzi:
Part1: Iji Wondershare TunesGo Ochie maka data nyefe si PC / Mac ka iPhone
Part2: Jiri iTunes nyefee foto site na Mac / pc ka iphone
Part3: Iji Email nyefee foto site na Mac / pc ka iphone
Part4: Jiri iCloud Drive nyefee foto site na Mac / pc ka iphone
Part5: Jiri Online Ígwé ojii Nchekwa dị ka Dropbox nyefee foto site na Mac / pc ka iphone
Nkebi nke 1: Iji Wondershare TunesGo Ochie maka data nyefe si PC / Mac ka iPhone
Ọ bụ nnọọ onye nke kasị mma software omume na ike ga-eji na-eme ka n'aka na foto site na Mac ma ọ bụ PC na-agafere ka iPhone na effortlessness. Ise na usoro ihe omume n'ji ọ dịghị mkpa na-tech savvy dị ka ọ ga-ekwe ka onye ọrụ nyefee faịlụ site na kọmputa na-PC na dị nnọọ a otu nzọụkwụ. The software reviews na e ọkọnọ site ọrụ-emekwa ka n'aka na ngwa bụ uru na-eji. Enweghị ihe ọ bụla ígwé ojii technology ndisịn idem ọ bụ nnọọ mkpa iburu n'obi na nyefe bụ 100% enem dị ka offline gburugburu ebe obibi nwekwara ike-eji. Rụzuru pụkwara mere site:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka ibudata na wụnye software site na URL http://www.wondershare.com/mac-ios-manager http://www.wondershare.com/mac-ios-manager na-emeghe ya na-eme n'aka na esonụ interface na-enweta:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na e jikọọ ekwentị na kọmputa dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
III. The software ga-akpaghị aka ịchọpụta photos nakwa dị ka njikọ data na Mac dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
too ogologo. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka Pịa Tinye n'elu nke software window Dị ka a pụrụ hụrụ na ogologo pasted hereunder. Nke a kwesịrị ime iji hụ na faịlụ site na Mac ma ọ bụ PC na-ahọrọ ndị a ga-kpọfere iPhone.
v. Ozugbo faịlụ e họrọ si interface onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa emeghe nyefee ha ka ha iPhone iji jide n'aka na usoro okokụre.
Part2: Jiri iTunes
Iji weta-enweghị atụ results na needful a ga-eme:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iPhone na jikọọ na PC dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
ii. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị ẹkedori iTunes na họrọ ọdịnaya bụ na-kwukwara na ngwaọrụ dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
III. Onye ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na ngwaọrụ na-emi odude site na ịpị akara ngosi ekwentị na e pụta ìhè:
too ogologo. Na-esote menu onye ọrụ kwesịrị ka ego "Iji aka jikwaa music na vidiyo" dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
v. Onye ọrụ na onye ahụ kwesịrị iji jide n'aka na na-esote na ihuenyo na itinye button na-kụrụ mezue usoro.
Part3: Jiri email
Ọ bụ nnọọ mfe usoro na ike ga-eji nyefee data site na otu ebe gaa ebe ọzọ ie iPhone. Iji na-enweta needful mere mfe usoro bụ:
m. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ọhụrụ mail dere na meghere na ya nwere ike mere site na ịpị Wụk - N on Mac dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịnyere chọrọ adreesị ozi-e na pịa pin icon aka ịchọta ndị foto na a ga-mmasị ka e gosiri n'okpuru:
III. Ozugbo email e ekewet na foto a mmasị onye ọrụ nwere ike pịa Send bọtịnụ mezue usoro dị ka nwere ike hụrụ n'okpuru:
too ogologo. Onye ọrụ nwere ike ịnweta otu adreesị ozi na iche na ekwentị na-eme ka n'aka na email na-abụghị nanị anya ma Mgbakwụnye na-ebudatara.
Part4: Jiri iCloud Drive
Tupu n'itinye usoro onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iCloud mbanye na-arụ ọrụ na iPhone nakwa dị ka Mac maka ezigbo nhazi nke a na-arụ. Iji-ahụ mkpa N'ihi mfe ọ na-gwara iji na-enweta ihe ziri ezi na nke a:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iPhone na jikọọ na Mac na mmasị na-enweta dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa iCloud dị ka ọ pụrụ ike hụrụ na snapshot n'okpuru:
III. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na iCloud mbanye na-enyocha dị ka nwere ike hụrụ n'okpuru:
too ogologo. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na ngwaọrụ ọhụrụ na jikọọ na Mac na usoro a na restarted ka mmekọrịta na faịlụ na ebe ekwentị mezue usoro.
Part5: Jiri Online Ígwé ojii Nchekwa dị ka Dropbox
Iji nweta rụzuru na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ na-esonụ bụ ka a mere na nke a na-eme ka n'aka na nsonaazụ kacha mma na-enwetara n'ime kacha nta na o kwere omume oge na dị ka uche na ọchịchọ nke onye ọrụ:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Dropbox ngwa na-tapped jidesie Ihuenyo nke ekwentị dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
ii. Na-esote na ihuenyo onye ọrụ ga-enwe ike ịhụ ihe niile faịlụ na photos na ndị ọzọ na stof na anọwo na echekwara na Dropbox dị ka e sere na screenshot n'okpuru;
III. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe ndị ha chọrọ faịlụ na meghere site na ịpị ya na ndị na-esonụ interface-egosi. The interface ga-iche dị ka ụdị nke faịlụ na e enweta:
too ogologo. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa akụ na ala nri akuku nke faịlụ dị ka nwere ike hụrụ n'okpuru:
v. Onye ọrụ na onye nwere ike ịzọpụta foto dị ka na-esote menu-egosi dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru ịrụcha usoro na ala na afọ ojuju:
> Resource> iPhone> otú nyefee Photos site na kọmputa na-iPhone